HomeArimaha Qoyska4 Wado Oo Aad Ula Dhaqmi Karto Jacaylka Dhinaca Kaliya Ah
Mid ka mid ah Arimaha uu qofku is waydiin karo ayaa ah marka uu jecelyahay qof kale laakiin uuna qofka uu jecelyahay la wadaagin jacaylka.
Sida caadiga ah arimaha jacaylka ayaa ku fiican in uu noqdo mid ay labada qof is dhaafanayaan ama wadaagaan maadama jacaylka dhinaca kaliya ah dhibaatooyin u keeno qofka.
Hadaba waxa aan halkan kuugu soo bandhigi doonaa sidii aad ula dhaqmi lahay jacalka dhinaca kaliya ah.
1.Ilaalinta sharaftaada iyo waliba wajigaaga:
Hadii uuna qofka aad jeceshahay kula wadaagayn jacaylka isku day in aad ilaashato sharaftaada iyo waliba wajigaada wax walba oo dhaca waxa xaqiiqo ah in aad qofkaas iloobi doonto maalmo iyo wakhti dambe.
2.In Aad Xidhiidh Kale Samayso:
Hadii ay noloshaada ku jiraan saaxiibo badan oo kala duwan waxa ay kaa caawin karaan in aad maamusho dareenkaaga adiga oo isku dayaya in aad ka fikirto iyaga taas oo kaa caawinaysa in aad miisaanto noloshaada.
Sidoo kale Saaxiibadaa ayaa ku mashquulinaya taas oo kaa caawinaysa in aad ku raaxaysato noloshaada waliba ku siinaysa kalsooni naftaada ah iyada oo waliba laga yaabo in ay kuu furto fursad kale oo aad qof kale ku jeclaato.
3.In Aad Mashquuliso Noloshaada:
Mar walba oo aad diirada saarto noloshaada waliba ku mashquuliso waxyaabaha kale ee aad u baahantahay waxa ay kaa caawinaysa in aad u hesho noloshaada waana arin aad u baahantahay in aad ku ilowdo jacaylka dhinaca kaliya ah iskuna day in aad jeclaato naftaada.
4.In Aad Hesho Sababta Uuna Qofka Kale Kula wadaagayn jacaylka:
Waxa laga yaabaa in qofka kale uu leeyahay sababo keenaysa in uuna kula wadaagin jacaylka, waxa laga yaabaa in uu qof kale jecelyahay ama uu dareenka uu kuu qabo ka duwan yahay midka aad adigu u qabto, heerka nolosha ee aad ku kala nooshihiin iyo waliba sababo kale oo badan ayaa kuu sheegi kara sababta uuna qofka kale kuula wadaagayn jacaylka.